University in The United States of America - Study Abroad
Education in U.S.A
အမေရိကန်နိုင်ငံက နိုင်ငံတကာကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားအများ ဆုံးလာရောက်ပညာ သင်ကြားသောနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးပညာရေးစနစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတကာကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားတစ်သန်းကျော်လာရောက်ပညာသင်ကြားလျက်ရှိပြီး နှစ်စဉ်လာရောက် ပညာသင်ကြားသူများလည်းဆက်လက်မြင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဆ ရာ၊ဆရာမများနှင့် သုတေသီများဖြင့် သင်ကြားပေးသောပညာရေးကိုပြောမည်ဆိုလျှင်လည်းအမေရိကန်ပညာရေးကထိပ်ဆုံးမှာရှိနေပါသည်။
နိုင်ငံတကာမှ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် ဘွဲ့ဒီဂရီပြီးသွားသည့်အခါ မှာလည်း နေထိုင်ခွင့်များ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ကုမ္ပဏီကြီးများတွင် အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) နယ်ပယ်မှ ဘွဲ့ရများသည် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ ရရှိရန် (၂) နှစ် အထိ နေထိုင် ခွင့််ပြုထားပါသည်။
5 Steps to study in U.S.A
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအမေရိကန်ပညာရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားပြီး သွားရောက်ပညာသင်ကြားလိုသည့် မြန်မာကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် အဆင့် (၅) ဆင့်ကိုဖြတ်သန်းအောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပထမအဆင့် : ကိုယ်တက်ရောက်မည့်ဘာသာရပ် ၊ တက္ကသိုလ်ကိုပညာရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့် ရွေးချယ်ရှာဖွေရန်
ဒုတိယအဆင့် : ကျောင်းလခ ၊ နေထိုင်စရိတ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းရန်
တတိယအဆင့် : လျှောက်လွှာတင်သွင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်
စတုတ္ထအဆင့် : ကျောင်းဝင်ခွင့် ရရှိပြီးပါကကျောင်းသားဗီဇာလျှောက်ထားမှု စတင်ရန်
ပဥ္စမအဆင့် : ဗီဇာရရှိပြီးလျှင် မြန်မာနိုင်ငံမှ မထွက်ခွာမီလိုအပ်သောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်
Tier 1 Universities in U.S.A
U.S.A News College Ranking ၏ထိပ်ဆုံးအဆင့်မှာရှိသောတက္ကသိုလ်များကို Tier 1 တက္ကသိုလ်များအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး Tier 1 Research University နှင့် Tier 1 Master University ဆိုပြီးထပ်မံခွဲခြားထားပါတယ်။ Tier2ကတော့ Ranking Tier 1 ထပ်နိမ့်သောတက္ကသိုလ်များကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီးအမေရိကန်မှာတော့ Tier အလိုက်တက္ကသိုလ်များကိုခွဲခြားထားပြီး Tier4အထိရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် အမေရိကန်မှာပညာသင်ကြားမည့် ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားတိုင်းအနေနဲ့မိမိတက်ရောက်မည့် ကောလိပ် တက္ကသိုလ်ကTier ဘယ်လောက်မှာရှိသောတက္ကသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ကောလိပ်နှင့် တက္ကသိုလ် (၄၀၀၀) ကျော်ရှိသည့်အတွက် ဘွဲ့ရပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နှင့်အနာဂတ်ပညာရေးအတွက် ခိုင်မာမှုရှိ ၊ မရှိဆိုတာမိမိပြီးဆုံးထားသောကောလိပ် နှင့်တက္ကသိုလ်များပေါ်တွင် များစွာ မူတည်ပါသည်။
Pathway Education Programme
အမေရိကန်မှာပညာသင်ကြားမည့် နိုင်ငံတကာကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများအတွက် အမေရိကန်အစိုးရ လမ်းကြောင်း များစွာဖန်တီးပေးထားပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဘွဲ့ကြိုတက်ရောက်မည့်ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများအတွက် SAT မလိုဘဲ Pathway program ကနေတက်ရောက်နိုင်သည့် လမ်းကြောင်းများဖွင့်လှစ်ပေးထားခြင်းကြောင့် နိုင်ငံ တကာ အသိုင်းအဝိုင်းက အမေရိကန်ပညာရေးကို စိတ်ဝင်စားသူများပြားလာခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
အလားတူ Postgraduate သွားရောက်တက်ရောက်လိုသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်လည်း GMAT မလိုဘဲ Graduate diploma များကနေ Master program ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းများလည်းရှိပါသည်။
University Pathway Program အောင်မြင်ထားသူများသည် သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွင် ဒုတိယနှစ်နှင့်ညီမျှသော University Sophomore Year မှတစ်ဆင့် ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ပြီး ၄ နှစ်အတွင်းအမေရိကန်အစိုးရအသိအမှတ်ပြု ဘွဲ့ဒီဂရီရရှိနိုင်ပါသည်။ University Pathway Program အတွက် ကြာချိန်ကတော့ ၈ လဝန်းကျင်ဖြစ်ပါသည်။
Bachelor degree သို့တိုက်ရိုက်တက်ရောက်လိုသော နိုင်ငံတကာကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများကSAT I နှင့် SAT II ကိုအောင်မြင်ထားရန်လိုအပ်ပြီး IGCSE A Level ပြီးဆုံးထားသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။အဆိုပါကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများအနေနဲ့ အမေရိကန်ကောလိပ် ၊ တက္ကသိုလ်များတွင် University Freshman Year ကို စတင် သင်ကြား နိုင်ပါသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် Master ဆက်လက်သင်ကြားလိုသူများကမူ Postgraduate diploma များမှတစ်ဆင့် တက်ရောက်နိုင်ပြီးဘာသာရပ်ပေါ်မူတည်၍ Master ဘွဲ့ဒီဂရီရရှိသည်အထိသင်တန်းကာလ ၁ နှစ်ခွဲမှ ၂ နှစ်အထိ ကြာမြင့်ပါသည်။
SAT ပြီးဆုံးထားသူများအတွက် ရမှတ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဝင်ခွင့်လက်ခံသည့်အတွက် လျှောက်ထားမည့်ဘာသာရပ်နှင့် တက္ကသိုလ် ပေါ်မူတည်၍ ကွာခြားမှုရှိနိုင်သည်ကိုသိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
Living Cost in U.S.A
အမေရိကန်မှာနေထိုင်ပြီးကျောင်းတက်မည့်ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများအတွက် နေထိုင်စားသောက်မှုကုန်ကျစရိတ်က ပြည်နယ်အလိုက်ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ကျောင်းသားတစ်ဦးအတွက် အကြမ်း မျဉ်းကုန်ကျစရိတ်ကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ယခုလိုတွက်ချက်ထားပါသည်။
Tuitioin fees : $ 5,000 to $ 50,000 per year
Food & Living : $ 8,000 to $ 12,000 per year
Monthly ticket public transport : $ 89
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကောင်းဆုံးပညာရေးစနစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည့်အပြင် နိုင်ငံတကာမှ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ အများဆုံးလာရောက်ပညာသင်ကြားကြပါသည်။ U.S.A တွင်ရှိသော တက္ကသိုလ်များ သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် Top Ranking ထဲတွင် မပျောက်ပျက်ပဲ ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သော အရည်အသွေး အဆင့်မှီ တက္ကသိုလ်များဖြစ်သည့်အတွက် နှစ်စဉ်လာရောက် ပညာသင်ကြားသူများသည် မြင့်တက်လျှက် ရှိပါသည်။
U.S.A ရှိတက္ကသိုလ်များသည် စာသင်ခန်းနှင့် အဆောင်များကို လုံလုံလောက်လောက်ပြင်ဆင်ပြီးမှ နိုင်ငံတကာမှ ပညာလာသင်ကြားမည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကိုလက်ခံကြပါသည်။ U.S.A ရှိတက္ကသိုလ်များ၏ စာသင်ခန်းများနှင့် အဆောင်များတွင် နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသူများလာရောက်ပညာသင်ကြား ကြသည့်အတွက် ယဉ်ကျေးမှု အမျိုးမျိူး၊ မတူညီသည့် Background အမျိုးမျိုးမှလာသည် ဖြစ်သော်လည်း Workshop, English- Language Practice Course, Orientation, Training များမှ တစ်ဆင့် အချိန်တိုအတွင်းမှာပင် နေသားတကျဖြစ်စေပြီး နေရာအသစ်မှ အတွေ့အကြုံသစ်များ နှင့် အောင်မြင်မှု့လမ်းစများ တွေ့ရှိစေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန်အစိုးရ၏အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလာရောက်ပညာသင်မည့် နိုင်ငံတကာကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများ အတွက် ထောက်ပံ့ပေးသော ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် Fulbright Scholarship နှင့် Humphrey Fellowship အစီအစဉ်များကိုတော့ မြန်မာကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားတိုင်း ရင်းနှီးကြပါသည်။
အဆိုပါပညာသင်ဆုအစီအစဉ်များအတွက် နှစ်စဉ် ဇူလိုင်လမတိုင်ခင်လျှောက်လွှာများလက်ခံပြီး ပညာသင်ဆု ရရှိသူတိုင်းကို ကျောင်းလခအပြင် နေထိုင်စရိတ် ၊ စားသောက်စရိတ်နှင့် အသုံးစရိတ်အပါအဝင် ကုန်ကျစရိတ် အားလုံးကို ပညာသင်ဆုကြေးအဖြစ်ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အမေရိကန်ပညာသင်ဆုနှင့်ပက်သက်ပြီး အမေရိကန်အစိုးရပညာသင်ဆုအပြင် အခြားပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းများ ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှ ပံ့ပိုးပေးသော ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်များ ၊ တက္ကသိုလ်၏ ပညာသင်ဆု အစီအစဉ်များလည်း ရှာဖွေလျှောက်ထားနိုင်ပါသေးသည်။
မြန်မာလူငယ်အများစုကတော့ တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းဝင်ခွင့်ပြည့်မီသူများအတွက် ပံ့ပိုးပေးလေ့ရှိသော တက္ကသိုလ် ပညာသင်ဆု အစီအစဉ်များကိုလျှောက်ထားကြပြီး ဝင်ခွင့်ရရှိသူများ၏ပညာရည်ထူးချွန်မှုအလိုက် ပညာသင်ဆု များကို ရရှိကြပါသည်။
STUDY ABROAD Information Centre က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပညာသွားရောက်သင်ကြားမည့် မြန်မာလူငယ်များအတွက် ပညာအရည်အချင်းပေါ်မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တာဝန်ရှိသူများထံ ပညာသင်ဆုများ အခမဲ့ လျှောက်ထားပေးလျက်ရှိပြီး၊ ကျောင်းဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာနှင့်ပက်သက်၍လည်း လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက် နှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့် အင်္ဂလိပ်စာဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးလျက်ရှိပါသည်။
Universities & Education Group in U.S.A
အမေရိကန်မှာသွားရောက်ပညာသင်ကြားမည့် နိုင်ငံတကာကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများအတွက်Tier 1 အဆင့် ရှိထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကြီးများတွင် ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် Shorelight Education ကို စတင်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး Undergraduate နှင့် Graduate နှစ်ခုလုံးအတွက် Pathway program များရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
Shorelight မှာ Partner universities (၁၇) ခုရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနှံ့အပြားမှ ထိပ်တန်း partner universities များ၏ campus များတွင် pathway သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများ အနေနှင့် မိမိရွေးချယ်သောဘာသာရပ် ၊ ဝင်ခွင့်ရရှိသည့်သင်တန်းပေါ်မူတည်ပြီး Bachelor degreeအတွက်ဆိုလျှင် (၄) နှစ် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး Master degreeဆိုပါကအနည်းဆုံး (၂) နှစ်ကြာမြင့်ပါမည်။
Adelphi University သည် Garden City, New York တွင် တည်ရှိသည့် Private University ဖြစ်ပါသည်။ Garden City မှ New York မြို့၏ စီးပွားရေးအချက်အခြာကျသော Manhattan မြို့ သို့ ရထားဖြင့် မိနစ် (၄၀) အတွင်း ရောက် ရှိနိုင် ပါသည်။ U.S. News & World Report 2020 အရ ‘Best Colleges Nationwide’ အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည့် တက္ကသိုလ် တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
Adelphi University တွင် Arts and Humanities, STEM and Social Sciences, Business, Health and Wellness နှင့် ဆက်နွယ် သည့် ဘာသာရပ်များကို တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထူးချွန်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Scholarship (USD 15,000) အထိကို (၄)နှစ် ဆက်တိုက် လျှောက်ထား ရရှိနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။
American University သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၏ မြို့တော်ဖြစ်သည့် Washington DC တွင်တည်ရှိသည့် Private Research University ဖြစ်ပါသည်။ U.S. News & World Report 2020 မှ #77 National Universities အဖြစ် သတ်မှတ် ထားသည့် တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည် သာမက #68 Research Universities အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့် တက္ကသိုလ် တစ်ခု လည်းဖြစ်ပါ သည်။
American University တွင် Business, International Relations, Public Affairs, STEAM Sciences, Communications နှင့် အခြားဘာသာရပ်များစွာကို သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။
ထူးချွန်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Scholarship (USD 12,000) အထိကို လျှောက်ထား ရရှိနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။
Auburn University သည် Auburn မြို့ Alabama ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသည့် Public Research University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ U.S. News & World Report, 2020 မှ #104 National Universities အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Auburn University တွင် Engineering, Business, Supply Chain Management, Journalism, Architecture and Design အစရှိသည့် ဘာသာရပ်များသည် top-ranked program များဖြစ်ကြ ပါသည်။
ထူးချွန်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Scholarship (USD 8,000) အထိကို လျှောက်ထား ရရှိနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။
Auburn University at Montgomery သည် Alabama ပြည်နယ် Montgomery မြို့တွင် တည်ရှိသည့် Public University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ U.S. News & World Report, 2019 အရ #22 Best Undergraduate Teaching အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံ ရသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Auburn University at Montgomery တွင် Art and Sciences, Business, Education, Nursing and Health Sciences, Sciences နှင့် ဆက်နွယ်သည့် ဘွဲ့ဒီဂရီများကို တက်ရောက်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။
ထူးချွန်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Scholarship (USD 2,000) အထိကို (၄)နှစ် ဆက်တိုက် လျှောက်ထား ရရှိနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။
Florida International University သည် Florida ပြည်နယ်၏ အထင်ကရနေရာဖြစ်သည့် Miami တွင်တည်ရှိသည့် Public Research University ဖြစ်ပါသည်။ U.S. News & World Report 2020 အရ Florida International University တွင် သင်ကြား ပေးသည့် ဘာသာရပ် (၁၆)ခု သည် ထိပ်တန်း (၁၀၀) စာရင်းဝင် ဘာသာရပ်များဖြစ်ပါသည်။
Florida International University တွင် International Business, Hospitality, Engineering, Criminal Justice အစရှိသည့် ဘာသာရပ် များသည် ထိပ်တန်းအဆင့်ဝင်ဘာသာရပ်များဖြစ်ကြပါသည်။
ထူးချွန်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Scholarship (USD 5,000) အထိကို လျှောက်ထား ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Louisiana State University သည် Baton Rouge, Louisiana တွင်တည်ရှိသည့် Public Research University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ U.S. News & World Report, 2020 အရ #153 National Universities အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့် တက္ကသိုလ် ဖြစ်သည် သာမက #72 Top Public Schools အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Louisiana State University ၏ Business, Engineering, Petroleum Engineering နှင့် STEM ဘာသာရပ်များသည် ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် ဘာသာရပ်များဖြစ်ပါသည်။
ထူးချွန်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Scholarship (USD 8,000) အထိကို လျှောက်ထား ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
University of Central Florida သည် Florida ပြည်နယ် Orlando တွင်တည်ရှိသည့် Public Research University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ U.S. News & World Report, 2020 အရ #16 Most Innovative School အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်သာမက #50 Undergraduate Research/ Creative Projects အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့် တက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
University of Central Florida ရှိ Engineering, Computer Engineering နှင့် Hospitality ဘာသာရပ်များသည် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဝင် ဘာသာရပ်များဖြစ်ပါသည်။
ထူးချွန်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Scholarship (USD 4,000) အထိကို လျှောက်ထား ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Dayton University သည် Ohio ပြည်နယ်ရှိ Dayton မြို့တွင် တည်ရှိသည့် Private Research University ဖြစ်သည်သာမက Ohio ပြည်နယ် တွင် ဒုတိယ အကြီးဆုံး Private University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ U.S. News & World Report, 2020 အရ #137 National Universities အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။
Dayton University သည် Engineering, Entrepreneurship, Business, Aerospace နှင့် Aviation Engineering ဘာသာရပ်များတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ထူးချွန်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Scholarship (USD 15,000) အထိကို (၄)နှစ် ဆက်တိုက် လျှောက်ထား ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
University of Illinois at Chicago သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည့် Chicago မြို့တွင် တည်ရှိသည့် Public Research University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Times Higher Education, 2020 အရ Top 25 Public Universities in the US အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည် သာမက U.S. News & World Report, 2020 အရ Top 150 National Universities အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
University of Illinois at Chicago သည် Engineering, Business, Architecture, Design, Education, Health Sciences, Public Health နှင့် Public Affairs ဘာသာရပ်များတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါသည်။
ထူးချွန်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Scholarship (USD 8,000) အထိကို (၄)နှစ် ဆက်တိုက် လျှောက်ထား ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
University of Kansas သည် Kansas ပြည်နယ် Lawrence တွင် တည်ရှိသည့် Public Research University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ U.S. News & World Report, 2020 အရ #130 National Universities အဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိသည် သာမက #59 Top Public Schools အဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
University of Kansas သည် Business, Engineering, Pharmacy, Education နှင့် Architecture ဘာသာရပ်များတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ထူးချွန်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Scholarship (USD 9,000) အထိကို (၄)နှစ် ဆက်တိုက် လျှောက်ထား ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
University of Massachusetts Boston သည် Massachusetts ပြည်နယ်၏ ပညာရေးမြို့တော် ဖြစ်သည့် Boston မြို့တွင် တည်ရှိပါသည်။ U.S. News & World Report, 2020 အရ Tier 1 National Universities အဖြစ်သတ်မှတ်ခံ ရသည့် တက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
University of Massachusetts Boston သည် College of Education and Human Development, College of Liberal Arts, College of Management, College of Nursing and Health Sciences, College of Science and Mathematics, McCormack School of Policy and Global Studies, School for the Environment အစရှိသည့် College များတွင် မိမိတက်ရောက်လိုသည့် ဘာသာရပ်များကို ရွေးချယ် တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထူးချွန်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Scholarship (USD 4,000) အထိကို (၄)နှစ် ဆက်တိုက် လျှောက်ထား ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
University of South Carolina သည် South Carolina ပြည်နယ်ရှိ Columbia မြို့တွင်တည်ရှိသည့် Public Research University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ U.S. News & World Report, 2020 အရ #104 National Universities အဖြစ် သတ်မှတ် ထားသည့် တက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
University of South Carolina တွင် Engineering, Computing, Business, Art & Science, Education, Hospitality, Retail and Sport Management, Information and Communications, Nursing, Pharmacy, Music အစရှိသည့် ပညာရပ်များနှင့် ဆက်နွယ်သည့် Degree Program များကို ရွေးချယ် တက်ရောက်နိုင်မည့်ဖြစ်ပါသည်။
ထူးချွန်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Scholarship (USD 10,000) အထိကို လျှောက်ထား ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
University of the Pacific သည် Northern California တွင်တည်ရှိသည့် Private University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ U.S. News & World Report, 2020 အရ #125 National Universities အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
University of the Pacific သည် School of Engineering and Computer Science, Eberhardt School of Business, College of the Pacific (Liberal Arts and Sciences), Conservatory of Music, School of Pharmacy and Health Sciences, Benerd College, School of International Studies အစရှိသည့် College များဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားသည့် တက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ထူးချွန်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Scholarship (USD 18,000) အထိကို (၄)နှစ် ဆက်တိုက် လျှောက်ထား ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Mercer University သည် Georgia ပြည်နယ် Macon တွင် တည်ရှိသည့် Private University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ U.S. News & World Report, 2020 အရ #153 National Universities အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
Mercer University သည် Business, Management, Marketing, Engineering, Biomedical Science, Psychology နှင့် Social Sciences ဘာသာရပ်များတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် တက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ထူးချွန်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Scholarship (USD 7,000) အထိကို (၄)နှစ် ဆက်တိုက် လျှောက်ထားရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
University of Mississippi သည် Mississippi ပြည်နယ် Oxford မြို့တွင် တည်ရှိသည့် Public Research University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ U.S. News & World Report, 2020 အရ #152 National Universities အဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိ သည်သာမက #76 Top Public Schools အဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
University of Mississippi သည် Business, Engineering, Accounting နှင့် Education ဘာသာရပ်များတွင် ထင်ရှား ကျော်ကြားသည့် တက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ထူးချွန်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Scholarship (USD 7,000) အထိကို လျှောက်ထား ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
American Collegiate – Washington. D.C
American Collegiate – Washington. D.C သည် American University Campus တွင်တည်ရှိပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်များကိုသို့ တက်ရောက်လိုသည့် နိုင်ငံတကာကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ကို သင်ကြားပေးသည့် Program ဖြစ်ပါသည်။
American Collegiate – Washing. D.C တွင် ပထမနှစ် အောင်မြင်ပြီးပါက ဒုတိယနှစ်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ထူးချွန်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Scholarship (USD 12,000) အထိကိုလျှောက်ထား ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
American Collegiate – L.A
American Collegiate – L.A သည် California ပြည်နယ်ရှိ Los Angeles မြို့တွင် တည်ရှိပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များကိုသို့ တက်ရောက်လိုသည့် နိုင်ငံတကာကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ကို သင်ကြားပေးသည့် Program ဖြစ်ပါသည်။ American Collegiate – L.A တွင် ပထမနှစ် အောင်မြင်ပြီးပါက ဒုတိယနှစ်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
INTO Education – USA
INTO ပညာရေး အဖွဲ့အစည်း သည် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို UK နိုင်ငံ နှင့် USA နိုင်ငံ တို့ရှိ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်များ တက်ရောက်ခွင့် ရရှိအောင် ဆက်သွယ်ထားပေးသော ပညာရေး အဖွဲ့ အစည်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ နှင့် တစ်နိုင်ငံ၏ ပညာရေး ဝင်ရောက်ခွင့်များ မတူညီသည့် အလျှောက် နိုင်ငံတကာ မှ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ မိမိတို့ တက်ရောက်လိုသော ဘာသာရပ်နှင့် တက္ကသိုလ်ကြီးများကို အဆင်ပြေပြေတက်ရောက် နိုင်အောင် U.S.A ၏ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်ကြီး (၁၁) ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး ၊ အဆိုပါ တက္ကသိုလ်ဝန်းအတွင်း ပင်လျှင် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ပထမ နှစ် (Freshman Year) နှင့် ညီမျှသော အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ဖြစ်သည့် International Year One ကို Undergraduate အတွက်ကို သင်ကြား ပို့ချပေးလျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံတကာမှ ဘွဲ့ရရှိပြီး သူများ အနေဖြင့် Graduate Pathway Programme မှ တစ်ဆင့် Master Degree များကို တက်ရောက်နိုင်အောင် ပေါင်းကူးတံတား သဖွယ် ဆက်သွယ် သင်ကြားပို့ချပေးလျက် ရှိပါသည်။
Colorado State University သည် Colorado Stateပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိ Fort Collins တွင်တည်ရှိသည့် အကောင်းဆုံးResearch & Publicတက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ Agricultural Sciences, Business Administration, Economics, Computer Science, Dance, Data Science, Engineering, Languages, Literatures and Cultures ( French or Spanish), Life Sciences Pre-Health Professions, Mathematics, Sciences စသည့် ဘာသာရပ်များသင်ကြားပေးနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ထားသူများ၊ IGCSE အောင်မြင်ထားသူများ၊ American High School Diploma အောင်မြင်ထားသူများအနေဖြင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ဖြစ်သည့် International Year One ကိုတက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်စာဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အရ IELTS (5.5) ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူများအနေဖြင့် Graduate Pathway မှတစ်ဆင့် Master Degree များရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Drew University သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ New Jersey ပြည်နယ်၊ Madison မြို့တွင်တည်ရှိပါသည်။ Drew University သည် ဧကပေါင်း (၁၈၆ ဧက) ရှိသည့် ကျယ်ဝန်းလှပသော ကျောင်းပရဝုဏ်ကြီးရှိပြီး ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား တို့အတွက် သုတေသနလုပ်ရန်၊ စူးစမ်းလေ့လာရန်၊ မိတ်ဆွေဖွဲ့ရန် အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Art, Biochemistry & Molecular Biology, Biology, Business, Computer Science, Economics, Environmental Studies & Sustainability, International Relations, Music, Political Science, Dance, Education, Engineering, Pre-Law, Pre-Medicine အစရှိသည့် ဘာသာရပ်များနှင့် အခြားဘာသာရပ်ပေါင်း များစွာကို သင်ကြားပေးနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ထားသူများ၊ IGCSE အောင်မြင်ထားသူများ၊ American High School Diploma အောင်မြင်ထားသူများ အနေဖြင့် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ဖြစ်သည့် International Year One ကိုတက်ရောက် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
George Mason University သည် ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်၏ Fairfax မြို့တွင်တည်ရှိပြီး သုတေသနအားကောင်းပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်ထဲမှာပါဝင်သည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Undergraduate pathway ဘာသာရပ်များအဖြစ် Business, Engineering, Computing and Statistics, Human and Social Development, Humanities and Social Sciences, Science စသည့် ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးနေပါသည်။
George Mason University တွင် Undergraduate pathway လျှောက်ထားမည့်သူများ အနေနှင့် American High School Diploma နှင့် IGCSE O Level ပြီးဆုံးထားရန် ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ထားရန်လိုအပ်ပြီး IELTS 5.5 ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ဖြစ်သည့် International Year One မှ စတင် တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူများအနေဖြင့် Graduate pathway ကို တက်ရောက်၍ Master Degree ကို ဆက်လက် တက်ရောက် နိုင်ပါသည်။
Hofstra University သည် New York ပြည်နယ် Hempstead တွင်တည်ရှိပြီး The Wall Street Journal & Time Higher Education, US College Ranking 2019 အရ US တွင် Top 25% တွင်ပါဝင်သည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ US & World Report 2019 အရ # 77 Best Value Schools ထဲတွင်ပါဝင်ပါသည်။ Undergraduate Pathway Program များအဖြစ် Business, Communication, Computer Science, Engineering, Fine and Performing Arts, Health Science/Exercise Science, Natural Science စသည့် ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ထားသူများ၊ IGCSE အောင်မြင်ထားသူများ၊ American High School Diploma အောင်မြင်ထားသူများအနေဖြင့် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ဖြစ်သည့် International Year One ကိုတက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အရ IELTS (5.0) ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူများ အနေဖြင့် Graduate pathway မှတစ်ဆင့် Accounting, Biology, Business Analytics, Computer Science, Creative Arts Therapy Counseling, Cybersecurity, Engineering Management, Finance, Health Administration, Health Informatics, Higher Education Leadership and Policy Studies, Information Systems, Marketing, Marketing Research and Analytics, MBA, Public Health, Quantitative Finance, Sports Science – Exercise Physiology, Sustainability, Urban Ecology စသည့်ဘာသာရပ်များကို ရွေးချယ်တက်ရောက်၍ Master Degree ကို ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Illinois State University သည် Illinois ပြည်နယ် Normal မြို့တွင်တည်ရှိပြီး US. News & World Report 2019 အရ Top 100 အတွင်းတွင်ပါဝင်သည့် Top Public School တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ Business, Computer Science, Fine Arts, Information Systems, Science, Applied Sciences and Technology ဘာသာရပ်များသင်ကြားပေးနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ထားသူများ၊ IGCSE အောင်မြင်ထားသူများ၊ American High School Diploma အောင်မြင်ထားသူများအနေဖြင့် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ဖြစ်သည့် International Year One ကိုတက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Oregon State University သည် Corvallis မြို့တွင်တည်ရှိပြီး Center for World University Ranking 2019 အရ Top 1% ထဲတွင်ပါဝင်သည့် Global University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Best College Review 2019 အရ # 41 Research University ဖြစ်ပြီး သုတေသနနှင့် ပက်သက်ပြီး အများဆုံးပံ့ပိုးပေးထားသော တက္ကသိုလ်များထဲမှာ လည်းပါဝင်ပါသည်။ Undergraduate pathway အတွက် Business ၊ Computer Science ၊ Engineering ၊ Exercise and Sport Science ၊ Food Science and Tecnology ၊ Forestry ၊ General, General-Liberal Arts Focus၊ Natural Resources and Renewable Materials ၊ Public Policy ၊ Science နှင့် Women and Gender Studies တို့ကို သင်ကြားပေးနေပါသည်။
Oregon State University တွင် American High School Diploma, IGCSE, တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ထားသူများအနေဖြင့် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ဖြစ်သည့် International Year One မှ စတင် တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
IELTS 5.5 ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူများအနေဖြင့် Graduate pathway ကို တက်ရောက်၍ Master Degree ကို ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Saint Louis University သည် Saint Louis မြို့တွင်တည်ရှိပြီး Us. News and World Report 2020 အရ အဆင့် 97 ရရှိထားသည့် National University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Saint Louis University တွင်သင်ကြားနေသည့် ဘာသာရပ် ၁၅ ခုသည် US တက္ကသိုလ်များတွင် Top 50 တွင် ပါဝင်ပါသည်။ Undergraduate Pathway အတွက် Aeronautics, Aerospace Engineering, Arts, Business, Computer Science, Engineering, Health Information Management, Mathematics and Statistics, Public Health, Science စသည့် ဘာသာရပ်များတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Saint Louis University တွင် American High School Diploma, IGCSE, တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ထားသူများအနေဖြင့် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ဖြစ်သည့် International Year One မှ စတင် တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ IELTS 5.5 ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဘွဲ့ရရှိပြီးသူများအနေဖြင့် Graduate pathway ကို မှတစ်ဆင့် Master Degree ကို တက်ရောက်နိုင်ပြီး သင်ကြားနိုင်သည့် ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် Applied Financial Economics, Artificial Intelligence, Bioinformatics and Computational Biology, Business Administration, Chemistry, Computer Science, Cybersecurity, Engineering, Health Data Science, Information Systems, Law (JD), Law (LLM),Nutrition and Dietetics, Public Health, Software Engineering, Supply Chain Management, Urban Planning and Development စသည့်ဘာသာရပ်များ ဖြစ်ပါသည်။
Suffolk University သည် Boston မြို့တွင်တည်ရှိပြီး Qs Top Universities Rankings 2019 အရ ကျောင်းသားများ အတွက် ပညာသင်ရန်အကောင်းဆုံးမြို့တွင် နံပါတ် (၁) နေရာမှ ပါဝင်ပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ တက္ကသိုလ်များ တွင် နိုင်ငံတကာမှ တက်ရောက်သည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားဦးရေ တွင် စတုတ္တအများဆုံး တည်ရှိသည့် တက္ကသိုလ် တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
Undergraduate Pathway အတွက် Art & Design, Business, Computer Science, Science and Mathematics စသည့်ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးနေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ထားသူများ၊ IGCSE, American High School Diploma အောင်မြင်ထားသူများအနေဖြင့် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ဖြစ်သည့် International Year One မှ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စာဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အနေဖြင့် IELTS ( 5.0) ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူများအနေဖြင့် Graduate Pathway မှတစ်ဆင့် Master Degree ကို တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
The University of Alabama at Birmgham သည် Alabama ပြည်နယ် Birmgham မြို့တွင်တည်ရှိပြီး Public Research တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ Time Higher Education 2019 အရ ကမ္ဘာ့သက်တမ်း အငယ်ဆုံးတက္ကသိုလ်များတွင် အဆင့် ( ၁၂) ရရှိထားပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ သက်တမ်းအငယ်ဆုံး တက္ကသိုလ်များတွင် အဆင့် (၁) ရရှိထားပါသည်။
INTO The University of Alabama at Birmgham တွင် Undergraduate Pathway အနေနှင့် Business, Computer and Information Science, Engineering, General Studies, Pre-Nursing, Public Health နှင့် Science ဘာသာရပ်များကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းပြီးဆုံးထားသူများ၊ American High School Diploma, IGCSE အောင်မြင်ထားသူများသည် IELTS ( 5.0) ရှိပါက အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ဖြစ်သည့် International Year One မှ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ဘွဲ့ရရှိပြီးသည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် Graduate Pathway မှတစ်ဆင့်Master Degree တက်ရောက်နိုင်ပြီး Data Science (Non-Background Program), Biotechnology, Business Administration (MBA), Civil Engineering, Computer Science, Cyber Security, Data Science, Educational Studies, Electrical and Computer Engineering, Engineering Management, Materials Engineering, MBA/MPH Dual Degree, Mechanical Engineering, Multidisciplinary Biomedical Sciences, Public Administration, Public Health, Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) စသည့်ဘာသာရပ်များရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
University of South Florida သည် Florida ပြည်နယ် Tampa မြို့တွင်တည်ရှိပြီး Tier 1 Carnegie Foundation Research တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ US News and World Report 2020 အရ Top Public Schools တွင် နံပါတ် (၄၄) နေရာမှ ပါဝင်၍ State For Higher Education တွင် နံပါတ် (၁) နေရာမှ ပါဝင်ပါသည်။ Undergraduate Pathway အတွက် Architecture, Business, Computer Science/Computer Engineering, Education, Engineering, Natural and Health Sciences, Visual and Performing Arts စသည့်ဘာသာရပ်များကို တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ထားသူများ၊ IGCSE, American High School Diploma အောင်မြင်ထား သူများအနေဖြင့် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ဖြစ်သည့် International Year One မှ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာ ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အနေဖြင့် IELTS ( 5.5) ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူများအနေဖြင့် Graduate Pathway မှတစ်ဆင့် Master Degree ကို တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Washington State University သည် Washington ပြည်နယ် Pullman တွင်တည်ရှိပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ သုတေသနနဲ့ပက်သက်ပြီး ထိပ်တန်းရောက်တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Washington State University သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ထိပ်တန်းအစိုးရတက္ကသိုလ် Ranking တွင် အဆင့် ၇၀ နေရာတွင်ရှိပြီး National Universities စာရင်းတွင် အဆင့် ၁၄၀ နေရာတွင် ပါဝင်ပါသည်။ Undergraduate Pathway အတွက် Agricultural Sciences, Architecture, Business, Computer Science, Engineering, Fine Arts, General Studies, Journalism/Communication, Mathematics, Science စသည့် ဘာသာရပ်များ သင်ကြားပေးနေပါသည်။
American High School Diploma, IGCSE, တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ထားသူများအနေဖြင့် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ဖြစ်သည့် International Year One မှ စတင် တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ IELTS 5.0 ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဘွဲ့ရရှိပြီးသူများအနေဖြင့် Graduate pathway ကို တက်ရောက်၍ Master Degree ကို ဆက်လက်တက် ရောက်နိုင်ပါ သည်။
Study Group – USA
Study Group ပညာရေး အဖွဲ့အစည်း UK နိုင်ငံ၊ USA နိုင်ငံ နှင့် Australia နိုင်ငံ တို့ရှိ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ တက္ကသိုလ်ကြီးများ ၏ အသိအမှတ်ပြု Foundation Programme, International Year One Programme နှင့် Pre-Masters Programme တို့ကို နိုင်ငံတကာ ကျောင်သူ၊ ကျောင်းသားများကို သင်ကြားပို့ချလျက် ရှိပါသည်။ Study Group UK သည့် U.S.A ရှိ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်ကြီး (၁၀) ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး ၊ အဆိုပါ တက္ကသိုလ်ဝန်းအတွင်း ပင်လျှင် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ပထမ နှစ် (Freshman Year) နှင့် ညီမျှသော အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ဖြစ်သည့် International Year One ကို Undergraduate အတွက်ကို သင်ကြား ပို့ချပေးလျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံတကာမှ ဘွဲ့ရရှိပြီး သူများ အနေဖြင့် Pre-Master Degree မှ တစ်ဆင့် Master Degree များကို တက်ရောက်နိုင်အောင် ပေါင်းကူးတံတား သဖွယ် ဆက်သွယ် သင်ကြားပို့ချပေးလျက် ရှိပါသည်။
Baylor University သည် Texas ပြည်နယ် Waco မြို့တွင်တည်ရှိပြီး (Times Higher Education US College Rankings, 2020) အရ best college in Texas တွင် အဆင့် (၇) တွင်ပါဝင်သည့် ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်ပါသည်။ US News & World Report, 2020 အရ Best Value Schools တွင် အဆင့် ( ၇၅) ရရှိထားပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ national တက္ကသိုလ်များတွင် အဆင့် ( ၇၉) ရရှိထားပါသည်။ Accounting, American Studies, Apparel Merchandising, Asian Studies, Astronomy, Aviation Administration, Aviation Sciences, Biochemistry, Bioinformatics, Child and Family Studies, Clinical Laboratory Science, Communication, Computer Science, Economics, Business, Life Sciences, Engineering, Film and Digital Media, International Business, Political Science, Psychology စသည့်ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ထားသူများ၊ IGCSE, American High School Diploma အောင်မြင်ထား သူများ အနေဖြင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်မှ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စာဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အရ IELTS (5.5) ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
De Paul University သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည့် Chicago မြို့တွင်တည်ရှိပါသည်။ (US News and World Report, 2020) အရ အဆင့် (၁၂၅) တွင်ပါဝင်သည့် ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Accountancy, Computer Science, Management, Art, Media, and Design, Business Administration, Communication and Media, Computer Science, Cybersecurity, Environmental Science, Information Technology, Management စသဖြင့် ဘာသာရပ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကိုသင်ကြားပေးနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ထားသူများ၊ IGCSE, American High School Diploma အောင်မြင်ထားပြီး IELTS (5.5) ရှိပါက အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ကို တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိထားသူများအနေဖြင့် IELTS (6.0) ရှိပါက Pre-Master Degree တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
University of Hartford သည် 1957 ခုနှစ်တည်းက တည်ထောင်ခဲ့ပြီး West of Hartford အနီးတွင်တည်ရှိပြီး ဧက (350) ခန့် ကျယ်ဝန်းတဲ့ Campus ကြီးရှိသည့် Public University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ University of Hardford သည် (U.S. News & World Report, 2020) အရ National တက္ကသိုလ်များတွင် အဆင့် (176) တွင်ပါဝင်သည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ Barney School of Business, Hartford Art School, College of Engineering, Technology and Architecture, College of Education, Nursing and Health Professions, The Hartt School, Hillyer College စသည်တို့တည်ရှိပြီး ဘာသာရပ်ပေါင်း (၈၀) ကျော်သင်ကြားနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ထားသူများ၊ IGCSE, American High School Diploma အောင်မြင်ထားသူများ အနေဖြင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ကို တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အရ IELTS (5.5) ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိထားသူများအနေဖြင့် IELTS (6.0) ရှိပါက Master Degree တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
James Madison University သည် 1908 ခုနှစ်ကတည်းက တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Virginia ပြည်နယ် Harrisonburg တွင်တည်ရှိပြီး #2 Top Public Schools in the U.S. South (U.S. News & World Report 2020) အဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပါသည်။US. South U.S. News & World Report, 2020 အရ Most Innovative School တွင် အဆင့် ( ၁) ရရှိထားပြီး Top Overall Regional Universities တွင်အဆင့် (၃) တွင်ပါဝင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ထားသူများ၊ IGCSE, American High School Diploma အောင်မြင်ထားသူ များ အနေဖြင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ဖြစ်သည့် International Year ကို တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အရ IELTS (5.5) ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ Arts and Letters, Business, Health and Behavioral Studies, Integrated Science and Engineering, Science and Mathematics, Visual and Performing Arts, Health Sciences, Psychology, Engineering, Computer Science, Hospitality Management, Sport and Recreation Management စသည့်ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးနေပါသည်။
Lipscomb University သည် Tennessee ပြည်နယ် Nashville မြို့တွင် တည်ရှိပါသည်။ Accounting, Art , Bioscience and Philosophy, Civil Engineering, Computer Science, Data Analytics, Electrical and Computer Engineering, Finance , Graphic Design , Hospitality Management , Philosophy, Social Work, Software Engineering, Visual Arts Administration, Fashion Design စသည့်ဘာသာရပ်များ သင်ကြားပေးနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ထားသူများ၊ IGCSE, American High School Diploma အောင်မြင်ထားသူ များ အနေဖြင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ် ကိုတက်ရောက် နိုင်ပါသည်။အင်္ဂလိပ်စာဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အရ IELTS (6.5) လိုအပ် ပါသည်။
Long Island University, Brooklyn သည် New York City, Brooklyn တွင်တည်ရှိပြီး Public University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Long Island University, Brooklyn ၏ Best Schools for Health Professionals majors သည် အဆင့် (၁) ရရှိထားပါသည်။ Accounting, Artificial Intelligence, Biochemistry, Bioinformatics, Business Administration, Childhood Education, Entrepreneurship, Health Science, Computer Science, Finance, Global Studies, Music Technology, Entrepreneurship and Production, International Relations, Media Arts, Nursing, Political Science, Psychology စသည့်ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ထားသူများ၊ IGCSE, American High School Diploma အောင်မြင်ထားသူ များ အနေဖြင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ် ကိုတက်ရောက် နိုင်ပါသည်။အင်္ဂလိပ်စာဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အရ IELTS (6.0) လိုအပ်ပါ သည်။
တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိထားသူများ အနေဖြင့် IELTS ( 6.5) ရှိပါက Master Degree တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Long Island University, Post သည် Brookville, New York တွင်တည်ရှိသည့် Public University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ US News & World Report, 2020 အရ National University များတွင် အဆင့် (၂၄၀) တွင်ပါဝင်သည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ထားသူများ၊ IGCSE, American High School Diploma အောင်မြင်ထားသူ များ အနေဖြင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ် ကိုတက်ရောက် နိုင်ပါသည်။အင်္ဂလိပ်စာဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အရ IELTS (6.0)လိုအပ်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိထားသူများ အနေဖြင့် IELTS ( 6.5) ရှိပါက Master Degree တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ Art, Art Education, Artificial Intelligence, Biology, Biochemistry, Business Administration, Entrepreneurship, Health Science, Computer Science, Finance, Global Studies, Music Technology, Entrepreneurship and Production, International Relations, Media Arts, Nursing, Political Science, Psychology စသည့်ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးနေပါသည်။
Lynn University သည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကတည်ထောင်ခဲ့ပြီး Florida ပြည်နယ်၊ Boca Raston တွင်တည်ရှိသည့် Private University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Aeronautics, Arts and Sciences, Business and Management, Communication and Design, Education စသည့်ဘာသာရပ်များနှင့် တခြားဘာသာရပ်ပေါင်းများစွာကို သင်ကြားပေးနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ထားသူများ၊ IGCSE, American High School Diploma အောင်မြင်ထားသူ များ အနေဖြင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ် ဖြစ်သည့် International Year ကိုတက်ရောက် နိုင်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အရ IELTS (5.5)လိုအပ်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိထားသူများ အနေဖြင့် IELTS ( 6.0) ရှိပါက Pre-Master Program ကိုတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Texas A&M University- Corpus Christi သည် Public University တစ်ခုဖြစ်ပြီး Texas ပြည်နယ်, Corpus Christi မြို့တွင်တည်ရှိပါသည်။ College of Business, College of Education and Human Development, College of Liberal Arts, College of Nursing and Health Science, College of Science and Engineering စသဖြင့်တည်ရှိပြီး ဘာသာရပ်များ (၈၀) ကျော်ကိုသင်ကြားပေးနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆယ်တန်းအောင်မြင် ထားသူများ၊ IGCSE, American High School Diploma အောင်မြင်ထားသူ များ အနေဖြင့် IELTS ( 5.5) ရှိပါက အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ် ဖြစ်သည့် International Year ကိုတက်ရောက် နိုင်ပါသည်။
Western Washington University သည် ၁၈၉၃ ခုနှစ်ကတည်ထောင်ခဲ့ပြီး Washington ပြည်နယ် Bellingham တွင် တည်ရှိသည့် Public University တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ US News & World Report 2020 အရ Best value Schools တွင် နံပါတ် ၃၃ နေရာတွင်ပါဝင်ပြီး Regional Universities West တွင် နံပါတ် (၁၇) တွင်ပါဝင်သည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Accounting, Business Administration, Economics, Art, Design, Humanities, Philosophy, Engineering & Design, Computer Science, Environmental Science, Early Childhood Education စသဖြင့် ဘာသာရပ်ပေါင်းများစွာကို သင်ယူနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆယ်တန်းအောင်မြင် ထားသူများ၊ IGCSE, American High School Diploma အောင်မြင်ထားသူ များ အနေဖြင့် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ် ဖြစ်သည့် International Year ကိုတက်ရောက် နိုင်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာ ဝင်ခွင့် လိုအပ်ချက် အရ (5.0) ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိထားသူများ အနေဖြင့် IELTS (6.0) ရှိပါက Pre-Master Program ကိုတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Navitas Education သည့် U.S.A ရှိ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်ကြီး (၉) ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး ၊ အဆိုပါ တက္ကသိုလ်ဝန်းအတွင်း ပင်လျှင် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ပထမ နှစ် (Freshman Year) နှင့် ညီမျှသော အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ဖြစ်သည့် International Year One ကို Undergraduate အတွက်ကို သင်ကြား ပို့ချပေးလျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်များမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူများအနေဖြင့် Graduate Pathway မှ တစ်ဆင့် Master Degree ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်အောင် လမ်းကြောင်းများ ထားရှိပေးထားပါသည်။
Richard Bland College William & Mary သည် Public junior college တစ်ခုဖြစ်ပြီး Virginia ပြည်နယ်တွင်တည်ရှိ ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင် ထားသူများ၊ IGCSE, American High School Diploma အောင်မြင်ထားသူများအနေဖြင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ် ၏ ပထမနှစ်ကို တက်ရောက် နိုင်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အနေဖြင့် IELTS ( 5.5) ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ Arts, Science, Math, Computer Science, Business, Behavioral Science, Physical Science စသည့် ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးနေပါသည်။
University of Massachusetts Boston သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ မက်ဆာချူးဆက် ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော်Boston မြို့တွင်တည်ရှိသည့် Public Research University တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၅ ခုမြောက်အကြီးဆုံး တက္ကသိုလ်တစ်ခု လည်းဖြစ်ပါသည်။ Management (Business), Engineering, Information Technology, Liberal Arts, Mathematics, Science စသည့်ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးနေပါသည်။
University of Massachusetts Boston တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ထားသူများ၊ IGCSE, American High School Diploma အောင်မြင်ထားသူများအနေဖြင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်ကို တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အရ IELTS (5.5) လိုအပ်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူများအနေဖြင့် Graduate UMass Boston Navitas Global Student Success Program (GSSP) မှတစ်ဆင့် Master Degree တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အရ IELTS ( 6.0) လိုအပ်ပါသည်။
Queen College သည် City University of New York ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး New York မြို့၏ Queens ရှိ လှပပြီးဧက ၈၀ ကျော် ကျယ်ဝန်းသည့် ကျောင်းCampusရှိသည့် ကောလိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ U.S. News & World Report 2020 အရ Top Public Schools, Regional Universities North တွင် အဆင့် (၉)နေရာတွင်တည်ရှိပြီး Best Value Schools တွင် နံပါတ် ( ၆၉) နေရာတွင် ပါဝင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ထားသူများ၊ IGCSE, American High School Diploma အောင်မြင်ထားသူများ အနေဖြင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၏ ပထမနှစ်မှစတင် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။အင်္ဂလိပ်စာဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်အနေဖြင့် IELTS (5.5) ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ Accounting, Business Administration, Computer Science, Data Science & Statistics,Design, Economics, Media Studies, Neuroscience, Photography & Imaging, Psychology, Studio Art စသည့်ဘာသာရပ်များတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များနှင့် Elite universities ဘွဲ့ကြိုနှင့် ဘွဲ့လွန်ဝင်ခွင့်များအတွက် ဦးစားပေးသင်ကြားပေးသည့် Kings Education က နိုင်ငံတကာကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများရွေးချယ်မှုများသော Pathway college ဖြစ်ပါသည်။ Transfer ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက်လည်း Kings Education ၏ကောလိပ်များ တွင်တက်ရောက်ပြီး မိမိတက်ရောက်လိုသောတက္ကသိုလ်သို့ပြောင်းရွေ့နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ ရှိပါသည်။
Kings ၏အားသာချက်ကကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို small class size နှင့် အတွေ့အကြုံရှိ ဆရာ ၊ ဆရာမများ အနီးကပ်ကြီးကြပ်သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပြီးကျောင်းပြင်ပ activities များဆိုလျှင်လည်း high-class ဆန်သော အားကစားများ ၊ လှုပ်ရှားမှုများထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
နိုင်ငံတကာကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Kings Education တွင် College (၄) ခုရှိပြီးလော့အိန်ဂလိစ် ၊ နယူးယောက် ၊ နယူးဂျာစီနှင့် ဘော့စတွန်မြို့များမှာတည်ရှိပါသည်။
အမေရိကန် Kings Education မှာ Pathway programs များအောင်မြင်ပြီးသူများ၏ ၆၀ % ဝန်းကျင်က ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် ၁၀၀ ထဲမှတက္ကသိုလ်များတွင် ဆက်လက်ပညာသင်ကြားလျက်ရှိပြီး ၂၅ % ဝန်းကျင်က ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် ၅၀ ထဲမှာတက်ရောက်ခွင့်ရရှိကြပါသည်။
ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားအများစုက University of Berkeley ၊ University of Los Angeles ၊ Wake Forest University ၊ College of William and Mary စသော elite universities များတွင် ဆက်လက်တက်ရောက်ကြပါသည်။
Kings Boston: Pine Manor College
Pine Manor College သည် အမေရိကန်၏ ပညာရေး မြို့တော်ဖြစ်သည့် ဘော့စတွန်မြို့တွင် တည်ရှိသော တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ IGCSE (သို့မဟုတ်) တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီး သူများအမေရိကန်နိုင်ငံ ၏ ပထမနှစ်ကို တက်ရောက် နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်း ဝင်ခွင့်အနေဖြင့် TOFEL 61 iBT သို့မဟုတ် IELTS 5.5 ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ Pine Manor College တွင် (၂) နှစ် တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးပါက အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များသို့ ပြောင်းရွေ့ တက်ရောက်နိုင်ပြီး Credit Transfer များလည်း ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Kings New York: College of Mount Saint Vincent
College of Mount Saint Vincent သည် New York တွင်တည်ရှိပြီး မြို့ပြအငွေ့အသက်ကြိုက်နှစ် သက်သော နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ရွေးချယ်စရာကောလိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါ သည်။ သွားလာရ လွယ်ကူသော အချက်အချာ နေရာမှာ တည်ရှိပြီး နိုင်ငံတကာကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား များအတွက် ကျောင်းဆောင်များရရှိအောင် စီစဉ်ပေးပါသည်။ ကျောင်းဝင်ခွင့် လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ IGCSE (သို့မဟုတ်) တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုအောင်မြင်ထားသူဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာ ဝင်ခွင့် သတ်မှတ် ချက်အနေ နှင့် IELTS 6.5 နှင့် TOFEL 80 iBT ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
Kings Wisconsin: University of Wisconsin
University of Wisconsin System သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အကြီးများဆုံး တက္ကသိုလ် ပညာရေးစနစ်တွင် ဝင်ပါသည်။ University of Wisconsin, Fox Cities တွင် (၂) နှစ် တက်ရောက်ပြီးပါက မိမိနှစ် သက်ရာ တက္ကသိုလ်များ သို့ တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Credit Transfer များလည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်း ဝင်ခွင့်အနေဖြင့် TOFEL 61 iBT သို့မဟုတ် IELTS 5.5 ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတက္ကသိုလ်ကြီးတွင် တက်ရောက်ရသည့် အတွက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတစ်ဦးချင်းစီကို နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ကြီးများ၏ Facilities အတိုင်းပံ့ပိုးပေးထား သည့် အားသာချက်များရရှိနိုင်ပါသည်။
Kings Los Angeles: California State University Fullerton
On-campus ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားတစ်ထောင်ဝန်းကျင်ရှိသော လော့အိန်ဂျလိစ်၏ California State University Fullerton အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီး IELTS 5.5 ရရှိထားသူတိုင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Program အားလုံးအတွက်သင်တန်းကာလ (၂)နှစ်သတ်မှတ်ထားပြီး California State University Fullerton မှကျောင်းသူကျောင်းသားများသည်အစိုးရတက္ကသိုလ်ကြီးများဖြစ်သော California State University များသို့ Transfer ဖြင့်သွားရောက်သင်ကြားနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများဖွင့်လှစ်ပေးထားပါ သည်။
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း Top 10 ဝင်တက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသင်ကြားရန်ရည်ရွယ်ထားသော မြန်မာနိုင်ငံမှကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများ အတွက် American Community College ကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနှံ့အပြားရှိ Community College များနှင့် ချိတ်ဆက်၍Pathway သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
SAT မရှိသေးသောနိုင်ငံတကာကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Foundation Course တက်ရောက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကောလိပ်များတွင် (၂) နှစ်သင်ကြားရုံနှင့် ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကြီးများတွင် ဆက်လက် တက်ရောက်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို မြန်မာကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် American Community College ၏ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ် STUDY ABROAD Information Centre က ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားပါမည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတည်ရှိသော Butte College ၏အားသာချက်ကတော့ နိုင်ငံ တကာကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများသင့်တင့်မျှတသောကျောင်းလခနှင့် နိုင်ငံ တကာ အဆင့်မှီ ပညာရေးကို လက်လှမ်းမှီ နိုင်စေရန် ဖန်တီးပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ Butte College မှ ပြီးဆုံးထားသူများက ၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထား သော ကမ္ဘာ့အဆင့် မှီ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များတွင် Bachelor degree (၂) နှစ် – (၃) နှစ် ဆက်လက် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားက Community college တွေထဲမှာတော့ နာမည်ကျော်ကြားဆုံးကောလိပ်ဖြစ်ပြီး Butte College တွင် Business ၊ Sciences ၊ Engineering ၊ Arts ၊ Media ၊ Computer Sciences နှင့် အခြားဘာသာရပ်များစွာ ရွေးချယ်သင်ကြားနိုင်ပါသည်။
Butte college က ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ၊ ချီဂိုမြို့မှာတည်ရှိပြီးနိုင်ငံတကာကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများအတွက် Pathway program များသင်ကြားပေးသောကောလိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလ (၂) နှစ်ကြာမြင့်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများ၊ IGCSE O Level ပြီးဆုံးထားသူများနှင့် American High School Diploma ပြီးဆုံးထားသူများလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
လူဦးရေတစ်သိန်းလောက်သာရှိတဲ့ ချီဂိုမြို့လေးကနေထိုင်စားသောက်စရိတ်သက်သာပြီးအေးချမ်းသောမြို့ငယ်လေးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ချီဂိုနှင့် Butte College က မိနစ် (၂၀) သာ ကွာဝေးပြီး ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများအတွက် အခမဲ့ဘက်စ်ကားများလည်းပြေးဆွဲပေးထားပါသည်။
သွားလာရေးအတွက် အဆင်ပြေသလို မြို့အတွင်းမှာလည်းရှော့ပင်းစင်တာ ၊ ပန်းခြံအပြင် အနီးနားတစ်ဝိုက်က တောတောင် တွေကိုလည်းခရီးတိုသွားရောက် လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။
Butte college တွင်တက်ရောက်မည့်သူများအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား IELTS 5.5 နှင့် TOFEL iBT 45 သို့မဟုတ် CBT 133 ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာကျောင်းတာဝန်ခံများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး မိမိစိတ်ဝင်စားသော ဘာသာရပ် များကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိပြီးပါကဗီဇာလျှောက်ထားမှုကိုစတင်နိုင်ပြီး (၅) ရက်အတွင်းကျောင်းသားဗီဇာ I-20 လျှောက်လွှာပုံစံ ကိုထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Stanford UC Berkeley San Francisco University Butte College
ကျောင်းလခ $ 36,000+ $ 36,000+ $ 16,000+ $ 7,000+
နေထိုင်စားစရိတ် $ 16,000+ $ 16,000+ $ 20,000+ $ 11,000+
စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် $ 52,000+ $ 52,000+ $36,000+ $ 18,000+